Git 2.31 hadda waa la heli karaa wuxuuna ku yimaadaa dayactirka godka | Laga soo bilaabo Linux
Git 2.31 hadda waa la heli karaa oo wuxuu ku yimaadaa dayactirka godka
Maalmo ka hor sii deynta nooca cusub ee Git 2.3 ayaa lagu dhawaaqay, mid ka mid ah kuwa ugu caansan, la isku halleyn karo iyo qaababka waxqabadka sare ee nidaamka xakamaynta, oo bixiya qalab horumarineed oo aan toos ahayn oo salka ku haya laamo iyo ku milmaan.
Marka loo eego noocii hore, 679 isbeddel ayaa la qaatay qaabka cusub, oo la diyaariyey iyadoo ay ka soo qayb galeen 85 horumariye, oo 23 kamid ah ay kaqeybqaateen horumarka markii ugu horeysay.
Git 2.31 Furaha Astaamaha Cusub
Qaabkan cusub ee Git 2.31 ku darista amarka "dayactirka git" ayaa la muujiyey in Waxay u oggolaaneysaa shaqo xilliyeed nidaamyada aan taageerin cron. Tusaale ahaan, amarka cusub, waxaad diyaarin kartaa inaad si xilliyo ah u bilowdo hawsha baakadka bakhaarka si aanad u sugin inta qufulka bakhaarku buuxinayo marka baakidhka si otomaatig ah loo sameeyo marka amarro badan la wado.
Isbeddel kale oo muuqda ayaa ah kaas waxay ku dartay taageero si ay uhesho tusmada gadaal ujeeda (revindex) faylasha xirmada, maadaama Git uu kaydiyo dhammaan xogta qaab shay, kuwaas oo lagu kaydiyaa faylal gooni ah. Si loo hagaajiyo waxtarka la shaqeynta keydka, walxaha waxaa lagu sii darayaa feylasha xirmada, taas oo macluumaadka lagu soo bandhigayo qaab qulqulka walxaha ah oo midba midka kale loo raacayo.
Xirmo-fayl kasta, waxaa la sameeyay feyl fayl (.idx) ah, kaas oo u oggolaanaya in la isticmaalo sheyga aqoonsiga si dhakhso leh loo go'aamiyo isugeynta faylka xirmada ee sheygan lagu keydiyay. Tusmada qaldan (.rev) ayaa lagu soo jeediyay Git 2.31 waxay ujeedadeedu tahay inay hagaajiso habka lagu ogaanayo sheyga aqoonsiga laga helo macluumaadka ku saabsan meesha uu sheygu ku yaal faylka xirmada.
Markii hore, beddelaadda noocan oo kale ah ayaa lagu samayn jiray duulimaadka inta lagu jiro falanqaynta laga bilaabo feyl xirmo ah oo waxaa lagu kaydiyey oo keliya xusuusta, taas oo aan oggolaan in dib loo isticmaalo tilmaamayaasha la sheegay laguna qasbay inay soo saaraan tusmo markasta. Hawlgalka dhisida tusmo waa yareeyo si loo dhiso noocyo labo shey oo shey ah oo lagu kala sooco boos ahaan, taas oo waqti ku qaadan karta faylasha baakadaha waaweyn
Dhinaca kale, waxaan ka heli karnaa taas Hagaajinta waxqabadka ayaa lagu daray ku saleysan muuqaalka qaabka faylka ee shaxda xaqiijinta, oo loo adeegsado in lagu hagaajiyo helitaanka macluumaadka ku saabsan xaqiijinta, xog cusub oo ku saabsan tirada jiilka ee xaqiijinta, taas oo loo isticmaali karo in lagu dedejiyo hawlgallada dheeraadka ah ee xaqiijinta.
Sidoo kale, awood dheeraad ah oo lagu baabi'inayo magaca laanta asalka ah ee keydadka cusub (qaabeynta qaab-dhismeedka init.default). Markaad galaysid keydadka dibedda, git wuxuu isku dayayaa inuu hubiyo laanta uu tilmaamayo HEAD, taasi waa, haddii server-ka dibadda uu adeegsanayo laanta "ugu weyn", markaa hawlgalka "git clone" wuxuu isku dayi doonaa inuu ka helo "ugu weyn" maxalliga ah.
Xulashada "–disk-use" lagu daray amarka "git rev-list" si loo muujiyo soo koobida cabirka walxaha.
Taageerada maktabadda muujinta joogtada ah ee PCRE1 ayaa meesha laga saaray.
Waxaa la siiyay awood si xoog ah loogu mamnuuco isticmaalka toobiyeyaasha, iyadoo si madax banaan looga shaqeynayo algorithm-ka. Mamnuucida waxaa lagu suurta galiyay iyadoo lagu meeleeyo qiimaha "maya" halbeegga xuduudaha.
Ikhtiyaarka "–magaca-qaab" ayaa lagu daray taliska "git rev-parse" si si cad loogu qeexo soo-saarka qaraabada ama dariiqooyinka dhammaystiran.
Qoraallada dhammaystiran ee Bash waxay ka dhigayaan wax fudud in lagu daro xeerarka dhammaystirka ee amarrada "git" ee u gaarka ah.
Lagu daray "–stdin" ikhtiyaarka ah "git bundle" amarka si aad u aqriso xiriidhada ka imanaya durdurinta caadiga ah
Fursadaha "– bidix-kaliya" iyo "--kaliya-kaliya" ayaa lagu daray taliska "git range-diff" si loo muujiyo hal dhinac oo keliya marka la barbardhigo tirada.
Ikhtiyaar lagu daray "–skip-to = »Ku socota« git difftool »amarka in dib loo bilaabo kalfadhi la carqaladeeyey oo ka yimid waddo aan sharci ahayn.
Xeerka Anshaxa (Xeerka Anshaxa), oo qeexaya mabaadi'da aasaasiga ah ee xallinta khilaafaadka u dhexeeya horumariyeyaasha, ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 (hore ayaa loo isticmaalay nooca 1.4).
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waad tashan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Git 2.31 hadda waa la heli karaa oo wuxuu ku yimaadaa dayactirka godka
Chrome OS 89 wuxuu la yimaadaa Telefoonka Hub, Wi-Fi Sync oo la wanaajiyo iyo inbadan